Deebii Ajajaan WBO Zoonii Lixaa Waa’ee Hookkara Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa Irratti Kennan - Kichuu
HomeAfaan OromooRadioDeebii Ajajaan WBO Zoonii Lixaa Waa’ee Hookkara Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa Irratti Kennan
Faayilii – Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa “Jaal Marroo” jedhamuun beekaman, Kumsaa Dirribaa
AMBOO —(voaafaanoromoo)— Boombii dhiheenya Mandiitti dhoosame dabalee, haleellaalee boombii fi ajjeechaalee Wallagga Lixaa fi Qellema Wallaggaa keessatti raaw’ataman, kan aangawoonni mootummaa “humnoota hidhatanii seeraa ala bosana keessa socho’an – garee ABO shanee tu raaw’ate” jechuun Waraana Bilisummaa Oromoo balaaleffatan – Ajajaan WBO Zoonii Lixaa maqaa “Jaal Marroo” jedhamuun waamaman – Kumsaa Dirribaa “himannaa dharaa ti” jechuuun haalan.
“Waraanni Bilisummaa Oromoo uummata irratti dhukaasee ajjeese hin beeku. Yoo uummata irraa namni tokkollee WBO’n nu ajjeeseera jedhe himate itti gaafatamummaa isaa ni fudhanna, jedhu. Caqasaa
Hidhamtoota Gad Lakkifaman, Komeelee Dhihaatanii fi Deebii Koomishinii Poolisii Oromiyaa
Mana Hidhaa masaraa Kumsaa Morodaa keessaa, Naqamtee
Magaalaa Naqamtee ka jiru mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti fi bakkawwan birootti namootni eega hidhamanii baatiileen sadii ka dabran tahun hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun isaanii kan isaan yaaddesse tahuu maatii hidhamtootaa keessa hagi tokko dubbatanii jiran.
AMBOO — Gama biraan hidhamtoonni lakkoobsi isaanii hin himamiin torbanuma kana keessa gad-lakkifamuun beekamee jira.
Haaluma wal-fakkaataan Godinaa Horroo-Guduruu Wallaggaa, aanaa Amuruutti namoonni hidhamuu jiraattonni hagi tokko himanii jiran. Bulchaan Aanichaa, Namootni hidhaman akka hiikaman murtaa’ee jira, jedhu.
Gama biraan namoonni yaroo adda addaatti “Leenjii haaroonsaa” jedhuun Mooraa Leenjii Poolisii Sanqalleetti walitti qabamaa turan keessa hagi tokko gadi dhiifamuun himamee jira. “Yeroo achi turretti hidhaa malee leenjii tokko hin argine” jedhu – kanneen gad-lakkifaman keessaa hagi tokko.
Lameen irrattiyyuu, deebii argachuuf Koomishinara Koomishinii poolisii Oromiyaa haasofsiisnee jirra.
OPDO’n Adaamaatti walgahii teesseetu akka #Lammaa Magarsaafi Abiy Ahmed waldhabaniitti haasa’aa jirti. Kun hololadha. Yeroo muddaman nama sabboonaa fakkaatu tokko as baasanii deggarsa hammaarratu. OPDOn OPDOdhumadha. Kana booda Lammaa Magarsaa dhiisiiti #Garbeeliifi Mikaa’eeliin samiirraa abidda uffatanii yoo gadi bu’aniyyuu qabsoo jalqabde hamma galmaan geessuutti karaatti hindhaabiin. Jarri jaruma. Sirni kun baduu qabdi. Kashalabbeefi Xawalwwaalleettis gurra hinqabiin. Qancarummaa siyaasaa kanarratti dammaqi yaa Oromoo!
OPDO ይህንን ትላንት አስረው ደብድበው የጣሉት ወጣት ጠዋት ሞቶ ተገኝቷል።
Inni kun isa Iji Kaameeraa arkee. Isaa Dhoysaatti tahaa jiru Iji Rabbii/waaqayyoo Bira hin #kunnee_TARRE arkuu Jira. Ammallee nuuf Abdiin Jira Biiftuun Bilisummaas nuuf ni baati. Isaanif garuu Wayyoo….. Hagam Jabaatullee Dukkanni Ificha hin mo’aatu.
Akkatti Jawaar Mohaammad lubbuu Oromootti qoosaa jiru agartani? Isa waa’eloonni isaa OPDOn Wallaggatti uummata nagaa ajjeesanii awwaalchallee dhorkanii waraabessa naachisan , “ waaqni dhiiga haa baasu jennee bira tarra..” jedhee qoosa. Jechi kun hedduu nama dhukkubsa. Lakki !! Gumaa keenya baasna; Qabsoo itti fufna malee callisnee bira hin tarru
OMN: Oduu Guyyaa (Fulbaana 20, 2019)
ስልጣን በአቛራጭ!!!!!ESAT Eletawi የኢህአዴግ ውህደትና መጪው ጊዜ